Muxuu ka yiri Arturo Vidal wararka sheegaya in Neymar Jr uu dib ugu soo laabanayo Barcelona? – Gool FM
Muxuu ka yiri Arturo Vidal wararka sheegaya in Neymar Jr uu dib ugu soo laabanayo Barcelona?
(Spain) 2 Luulyo 2019. Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Barcelona Arturo Vidal ayaa ka hadlay wararka sheegaya in Neymar Jr uu dib ugu soo laabanayo garoonka Cump Nou suuqan xagaaga.
Hadalka Arturo Vidal ayaa wuxuu imaanayaa, kaddib markii uu kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka xulkiisa qaranka Chile uu kula ciyaari doono Peru wareega afar dhamaadka ee Copa America 2019.
Vidal ayaa inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id la weydiiyay su’aal ku aadaneyd wararka sheegaya in Neymar Jr uu dib ugu soo laabanayo kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Barcelona, waxaan la ciyaarayaa ciyaartoyda ugu fiican, haddii ay Barca dooneyso Neymar wax dhibaato ah kuma qabo”.
“Waxaan hada diirada saarayaa xulkeyga qaranka,waxaana isku dayi doonaan inaan kula guuleysto Copa America 2019, sidaas darteed waxaa jira shaqsiyaad ku sugan Barcelona ee mas’uul ka ah inay sameeyaan waxyaabahan”.
“Waxaan maalin walba isku dayaaa inaan noqdo kan ugu fiican ee booskeyga, ma ahan kaliya xulkeyga Chile laakiin sidoo kale addunka oo dhan, waxaan helay ixtiraam, kaddib dadaalka iyo shaqada adag ee aan qabtay, waxaan ku faraxsanahay inaan u ciyaaray kooxaha ugu fiican adduunka”.